Malunga nathi - BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD
BI-EIJING SHOU GANG-GITANE IZINTO EZINTSHA ZIYA., LTDngumvelisi okhethekileyo, onembali engaphezulu kweminyaka engama-60, yokuvelisa iingcingo ezikhethekileyo zeengxubevange kunye nemicu ye-alloys zokumelana nobushushu, ii-alloys zokumelana ne-eletrical, ii-steels ezingenazintsimbi kunye neengcingo ezijikelezayo zesicelo semizi-mveliso nasekhaya njlnjl. Inkampani igubungela i-88,000m² kwaye inendawo I-39,268mroom yegumbi lokusebenzela. IGITANE inabanobhala abangama-500 kubandakanya iipesenti ezingama-30 zomsebenzi wobugcisa. I-SG-GITANE ifumene isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni ye-ISO9002 ngo-1996 IGS-GITANE yafumana isatifikethi semfundo esemgangathweni ye-ISO9001 ngo-2003.
Inkampani ye-SG-GITANE lishishini eliphambili kwezobuchwephesha eligxile kwimveliso yentsimbi ye-alloy wire alloy, imitya, ucingo oluchanekileyo lwentambo, ukusika lula intsimbi engenazingcingo, izinto zokuhambisa umatshini wokucoca imoto, umatshini wokumelana neziqhoboshi zesantya esiphezulu kunye neenqanawa zikaloliwe zasezidolophini, i-amorphous tape kunye nomxholo wombane, ukugcinwa kwamandla okugcina umbane, izinto ezizodwa zentsimbi engenazingcingo, umtya kunye nezinto ezizodwa zentsimbi. I-SG-GITANE ngokwayo ineseti epheleleyo yezixhobo zemveliso kubandakanya ukunyibilika, ukubumba kunye nokuqengqeleka, ukuzoba, unyango lwentloko, ukolula kunye nokucoca njlnjl ngokwamkela izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji. Le nkampani ibonakaliswe yitekhnoloji yokuvelisa eyahlukileyo, izixhobo ezikhuphisanayo zolawulo lomgangatho, umgangatho ozinzileyo wemveliso, kunye nolwaneliseko olwanelisayo lwamabakala kunye neenkcukacha.
Inkampani ye-SG-GITANE "inesatifikethi sokuchonga ishishini eliphezulu", "isatifikethi seZiko leTekhnoloji ye-Beijing" kunye "neshishini lokuphanda ngokudibanisa ishishini lesithili sase-Changping". Ngo-2010, inkampani yabalwa "njengeyunithi standard" yenkqubo yolawulo kwemigangatho yokhuseleko imveliso ngu-Beijing Work Safety Association; ukusukela ngo-2010 ukuya ku-2012, kwathiwa yi-Beijing Changping District yi Beijing Changping District Abantu 'urhulumente "unit Advanced ulondolozo lwamandla"; Ngo-2011 nango-2012, kwathiwa i "unit phambili ulondolozo lwamandla" e Changping District of Beijing liqela elikhokelayo ulondolozo lwamandla nokunciphisa ukusetyenziswa District Beijing Changping.
Ngo-2011, kwathiwa "njengeyunithi esemgangathweni" yokubeka emgangathweni ukhuseleko kwimveliso yamashishini eshishini kwisithili saseChangping nguLawulo lweSithili saseBeijing Changping sokhuseleko lomsebenzi; ngoMeyi 2012, i-chromium aluminium intsimbi ifayibha eziphathekayo izinto eziveliswa yinkampani yethu bafumane isatifikethi imveliso kazwelonke engundoqo entsha ekhutshwe yi-Ofisi yoMphathiswa inzululwazi neteknoloji; Ngo-2012, uphawu lwentengiso lwenkampani "INGXOLO" yanikezelwa uphawu lokuthengisa oludumileyo lwaseBeijing; ophetheyo ngokuQulunqa "i-GB / t-1234 yokumelana ne-alloy ephezulu yokufudumeza umbane" "" Fe Cr Al foil yesinyithi sombusi ophethe isixhobo semoto esiguqulayo "," GB / t36516 Fe Cr al fiber wire for automotive purification filter "," GB / t13300 indlela yovavanyo yobomi ekhawulezayo yokumelana nengxubevange ephezulu yombane ";
Ngo-2015, yaba yiyunithi yokubonisa impumelelo yeenguqu kumashishini aphezulu e-Beijing; ngo-2015, waphumelela ibhaso ezintsha of China Industry University Research Cooperation ekhutshwe China Industry University Research Cooperation Promotion Association; ngo-2015, "impumelelo impumelelo projekthi projekthi izinto-yokusebenza eliphezulu izinto zokucoca zeemoto" waphumelela ibhaso lokuqala umgangatho imveliso imveliso igalelo ibhaso kwiziko uvavanyo Beijing imveliso. Ukubambelela kuphuhliso oluhambelanayo lwamashishini noluntu, inkampani ityale phantse i-yuan yezigidi ezili-10 ukomeleza ulwakhiwo lokhuselo lokusingqongileyo kunye nezixhobo zokonga umbane, kwaye yaphumelela isihloko secandelo lokugcina amanzi eliphambili eBeijing.
I-SG-GITANE inikezela ingqalelo enkulu kwiimfuno zentengiso kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha, ineqela elizimisele kwaye elinakho labasebenzi bezobugcisa. Abantu bamkelekile kwizangqa ezahlukeneyo kunye nabahlobo ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba batyelele, babambe iingxoxo zeshishini kwaye basasaze intsebenziswano kwezoqoqosho kunye nathi. Singathanda ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo kunye neemveliso ezigqwesileyo kubathengi.
Ucingo lokuFudumeza ngombane, Umbane wesiFudumezi, Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Umbane oFudumeza umbane ngombane, Ukuxhathisa ngombane, Ubushushu Resistant Electrical Wire,